TradeFred bụ uwa online Forex na CFD trading n'elu ikpo okwu. Anyị ọkachamara Nchikota ego na ahịa nkwado nka ana achi achi na anyị nwere ike na-enye gị ihe ulo oru mbo na ahụmahụ kwekọọ n'ihe na gị onye na ulo oru mbo style. Anyị na-agbalịsi ike ịnọgide na-enwe ọnọdụ anyị dị ka a tụkwasịrị obi aha na ndị ụlọ ọrụ, ekele anyị usoro ziri ezi na ndị ahịa na-abara obibia.
Gịnị mere i kwesịrị iso TradeFred?
– Mbụ na klas trading ahụmahụ, tinyere warara agbasa nke naanị 0.1 pips.
– Expert ego iji ichepụta gị ezigbo trading atụmatụ.
– Open ọhụrụ trading ọnọdụ enweghị adọpụ uche mmetụta uche mmadụ.
– Ohere ngwangwa ka gị ego gị na nanị otu ọrụ ụbọchị gafee multiple ịkwụ ụgwọ ụzọ.
– elu trading, pụrụ ịdabere na iji nhazi ma na ngwa ngwa, mmejuputa iwu.
– Unlimited demo ego na akaụntụ na a n'ọbá akwụkwọ nke free ọzụzụ ego.
– Ahịa akụ na-enwe na mbụ na klas mmiri, iche kpam kpam n'ebe anyị onwe anyị ego.
– Raara Account Manager na ọtụtụ asụsụ ahịa ọrụ ìgwè.
– Malite erekwa Forex na CFDs na a ala mbụ ulo oru mbo nke naanị $ 250.
New ka Forex? Mụta ahia ka a pro na-amalite na gị ego njem n'oge na-adịghị na niile.
Adịghị akwụ ụgwọ maka oké ọnụ ihe. Zọpụta oge na ego na ndị a FREE ngwaọrụ si TradeFred Academy:
TradeFred si Products:
TradeFred na-elekwasị anya trading Forex na CFDs. Ha na-ekpuchi a karịa ezigbo nso nke ahịa, na fọrọ nke nta 50 ego na abụọ gụnyere ke FX ngalaba naanị.
Ogbugbu nke Forex trading bụ doro anya na oké, na mgbe saịtị awade nnọọ asọmpi na-agbasa, anyị ga na-ekwu na TradeFreds agbasa na ofu. The kacha ekwe omume leverage maka Forex ụzọ abụọ bụ 1:50.
The ngwaahịa ngalaba nwere a “mma egbu” paired na oké-agbasa na sara mbara ahịa mkpuchi. The kacha leverage maka ngwaahịa a, Atiya bụ naanị 1:10.
The indices nke na-ekpuchi na ahịa si 6 kọntinent na-awade asọmpi na-agbasa. The kacha leverage bụkwa ubé ala a, Atiya: Ọ ẹkenịmde na 1:25.
Oké ọnụ ahịa ọla dị ka gold, ọlaọcha na platinum na-mgbe na-ewu ewu na-azụ ahịa. na TradeFred, ọrụ ike ahia ọla ndị dị na ezi na-agbasa na a kacha leverage of 1:25.
Dị ka ọ bụla ezi na reputable brokerage, TradeFred eji MT4 dị ka centerpiece nke ya n'elu ikpo okwu na àjà. Ike kacha ike n'elu ikpo okwu awa site TradeFred bụ MT4 Desktop Trader, nke na-abịa na-ezu ụlọ nke MT4 charting ngwọta na technical analysis ngwaọrụ.
Osise nwere ike na-egosipụta na otu nnukwu nso nke timeframes, nwere ike ahaziri, na eserese ndebiri nwere ike-azọpụta otú ahịa nwere ike iwerekwa ha emechaa. Ma ihe ndị technical analysis, banyere 50 egosi na tupu-arụnyere na n'elu ikpo okwu. N'ezie, ahịa nwere ike họrọ iji wụnye ọbụna ihe na-egosi na ha na-azụ ma ọ bụ zụta maka free. Ọrụ nwekwara ike ike ha onwe ha na-egosi.
One of MT4 na-eme idu ke EAs (Expert etozu) na ahịa nwere ike iji maka akpaka trading. Na mgbakwunye, TradeFreds MT4 enyere trading nke Forex na CFDs na otu na ihuenyo na-enyekwa ọkachamara ahịa elekọta ka ohere ọkachamara ahịa analysis na izi ihe.
MT4 nwere ike ibudata maka free si TradeFred website.
TradeFred Account ụdị:
TradeFred awade a kemfe demo akaụntụ na-enye ohere ahịa na-na-ikpo okwu na a n'ihe ize ndụ-free ule atụ ogho. The ngosi akaụntụ na-agụnye $ 10,000 na mebere ego na a otutu izi ihe. The akaụntụ ike ga-eji maka 14 ụbọchị, mgbe ahụ, ọ dị nnọọ expires.
The Basic nwere ike ịbụ ihe kasị mma nhọrọ maka beginners. The kacha nta nkwụnye ego chọrọ na a na akaụntụ bụ naanị $ 260 na kacha leverage bụ 1:50. The akaụntụ a raara onwe ya nye manager nakwa dị ka a ụbọchị azụmahịa withdrawals.
Ọkọlọtọ akaụntụ nwekwara inweta ọtụtụ ahịa, beginners na elu ọrụ. The kacha nta nkwụnye ego chọrọ bụ $ 500, na kacha leverage bụkwa 1:50. The naanị ọzọ mma na Standard akaụntụ nwere n'elu Basic bụ ahịa analysis ọ na-enye.
The ogologo akaụntụ na-achọ a kacha nta ego nke $ 1,000. The trading ọnọdụ na-ndị e kwuru n'elu, ma na akaụntụ nwekwara trading n'ókè nke na-anapụta ozugbo na mobile phones nke ndị ahịa.
Na a kacha nta ego nke $ 5,000, egwuregwu maka pro akaụntụ nke iru nke ahịa. Market analysis na-enyere ndị ahịa na-ada n'ime nke a udi nke akaụntụ, na-agbasa bụ ala n'ihi na pro-akaụntụ ahịa.
The adịchaghị na akaụntụ bụ na n'elu osisi: kacha nta nkwụnye ego bụ $ 10,000. Ezie na trading ọnọdụ dị n'ụzọ dị ukwuu ahụ dị ka n'elu, N'ihi nke a bụ nnoo a efu-gbanwee akaụntụ.
Ekiri ihe a video on YouTube
TradeFred bụ mpako na-arụ ọrụ ndị dị n'ụwa na-eduga ego n'elu ikpo okwu – MetaTrader 4. Na nke a video, anyị ga-akọwa otú e si eji ikpo okwu na nkiti atụmatụ na dị.
Ibe gị Forex ihe ọmụma na FREE n'ókè *
Mere ịkwụ ụgwọ maka oké ọnụ n'ókè mgbe i nwere ike inwe ha maka FREE?
Ị gaghị agbaghara gị ohere. Jikọọ TradeFred na-ekwu
gị n'ókè na mma gị na ego nkà.
Nke a ọwa na-mara dị ...
AION Review - ngọngọ Chain 3.0 -...
ỌHỤRỤ Twitter: ngwaahịa ntuli, ...
mgbanwen'elu ikpo okwutrading
Previous Post:Blockchain News 21.08.2018
Can $100k BITCOIN be the NEW $10k? CARDANO Shelley Upgrade, MAKERDAO, BINANCE, NEO – kaadị News
Actual Bitcoin FOMO | Cardano Milestone | Institution Buying ETH 1300% Premium | kaadị News
altcoin AltCoin Buzz altcoin kwa ụbọchị altcoins bitcoin bitcoin analysis Bitcoin okuku bitcoin okuku n'elu bitcoin ozi ọma bitcoin ozi ọma taa bitcoin prediction Bitcoin price bitcoin price ibu bitcoin price ozi ọma bitcoin technical analysis bitcoin taa ngọngọ yinye BTC BTC ozi ọma BTC taa cardano kaadị cryptocurrency cryptocurrency ahịa cryptocurrency ozi ọma cryptocurrency trading kaadị ozi decentralized EOS ethereum ethereum analysis ethereum ozi ọma ethereum price esi mee ka ego ịkwụsị etinye bitcoin ịkwụsị kaadị na-bitcoin mere n'iyi litecoin neo ozi ripple tron mgbe ịzụta bitcoin xrp